बौरिउठाइ र जीवन – Word of Truth, Nepal
बौरिउठाइ र जीवन
यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तकको अध्ययन गर्ने क्रममा हामी येशू ख्रीष्ट वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनेर हेर्दैछौं। यहाँसम्मको अध्ययनमा हामीले थाह पायौं, उहाँ:
जीवनको पानी हुनुहुन्छ
जीवनको रोटी हुनुहुन्छ
संसारको ज्योति हुनुहुन्छ
मुक्तिको ढोका हुनुहुन्छ
असल गोठालो हुनुहुन्छ
यूहन्ना ११:२५ पनि अर्को “म हुँ” पद हो जसले हामीलाई येशू ख्रीष्ट साँच्चै को हुनुहुन्छ भनेर राम्ररी बुझ्न मदत गर्छ: “____________ र ________________ म नै हुँ; जसले म माथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि ______________।” आऔं, अब यस पद भएको अध्यायलाई अध्ययन गरौं:
यूहन्ना ११ अध्यायको रुपरेखा
लाजरसको रोग र मृत्यु (यूहन्ना ११:१-१६)।
मानिसहरू सुन्छन् र येशू पीडित हुनुहुन्छ (यूहन्ना ११:१७-३८)
येशू लाजरसलाई मृत्युबाट बौराएर उठाउनुहुन्छ (यूहन्ना ११:३९-४४)
येशूका शत्रुहरूले षड्यन्त्र रच्दछन् (यूहन्ना ११:४५-५७)।
यूहन्ना ११ अध्यायमा हामी येशूको एउटा आश्चर्यकर्मलाई अध्ययन गर्नेछौं। मानव इतिहासमै नभएको कार्य येशूद्वारा गरियो। उहाँले मरेर __________ दिन भइसकेको (यूहन्ना ११:३९) एउटा मानिसलाई बौराएर उठाउनुभयो। पुराना नियमका समयहरूमा परमेश्वरले आफ्ना भविष्यवक्ताहरूद्वारा विशेष प्रकारले काम गर्नुहुन्थ्यो र यी व्यक्तिहरूले समेत मरेका मानिसहरूलाई जिउँदो पारेका थिए (१ राजा १७:१७-२४ मा एलियाले र २ राजा ४:१-३७, १३:२०-२१ मा एलिशाले)। तर ती मानिसहरू मरेर चार दिन भएका थिएनन्।
येशूले मरेकालाई उठाउनुभएको यो पहिलो पटक थिएन। उहाँले याइसरकी छोरीलाई उठाउनुभएको थियो जो मरेको केही छिन मात्रै भएको थियो (लूका ८:४१-५६)। उहाँले विधवाको छोरालाई पनि जिवीत पार्नुभयो, जो मरेर त्यस्तै एकदिन भन्दा बढी भएको थिएन (लूका ७:११-१५)। तर यी तीनओटा आश्चर्यकर्मभन्दा पनि ठूलो आश्चर्यकर्म हामी यूहन्ना ११ अध्यायमा देख्छौं र यस आश्चर्यकर्मले साँच्चै नै यहूदीहरूका बीचमा एउटा हलचल नै मच्चायो (यूहन्ना ११:४७-४८, १२:९)। अब हामी यूहन्ना ११ अध्यायतिर लाग्छौं र हामीले के सिक्न सक्छौं, त्यो हेर्नेछौं।
लाजरसको रोग र मृत्यु
यूहन्ना ११:१ मा हामी लाजरसलाई वि _________ अवस्थामा भेट्टाउँछौं। उनी कत्तिका विरामी थिए? केही दिन पछाडि त लाजरस __________ छन् (यूहन्ना ११:१४)। उनको रोगले उनलाई छिट्टै चिहानमा पुर्‍यायो।
लाजरस _____________ शहरमा बस्दथे (यूहन्ना ११:१), जुन शहर अर्को ठूलो शहर ___________को नजिकै पर्थ्यो (यूहन्ना ११:१८– बेथानी यरुशलेमबाट पुगनपुग २ माईल टाढा थियो। बाइबल मानचित्रमा हेरेर बेथानी र यरुशलेम भेट्टाउनुहोस्)।
लाजरसका दुईटी दिदीहरूका नाम के के थिए (यूहन्ना ११:१)? _________________ ____________। यी दुईटी दिदीबहिनीहरूका बारेमा हामी लूका १०:३८-४२ मा पनि पाउँछौं। यूहन्ना ११:२ मा मरियमले येशूका निम्ति गरेकी एउटा कामको पनि उल्लेख छ। यसबारेमा यूहन्ना १२:१-८ मा हामी अझै अरू कुराहरू सिक्न सक्छौं।
मार्था र मरियमले येशूलाई एउटा खबर पठाए (यूहन्ना ११:३)। तिनीहरू चाहन्थे, येशू झट्टै आउनुभएर उनीहरूका भाइलाई निको पार्नुभएको। तिनीहरू येशूले यो काम गर्नुहुनेछ भनेर ढुक्क थिए किनभने येशूले लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। के साँच्चै येशूले लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो त (यूहन्ना ११:५)? ______________। के येशू झट्टै बेथानी आइपुग्नुभयो (यूहन्ना ११:६)? ______________। याद राखौं, परमेश्वरले सधैं हामीले उहाँबाट चाहेजस्तै गर्नुहुन्न अथवा हामीले सोचेजस्तै गर्नुहुन्न। परमेश्वरले जे सर्वोत्तम छ त्यही गर्नुहुन्छ! सर्वोत्तम कुन हो भनेर जान्ने को हो? परमेश्वर कि हामी? ________________।
लाजरस विरामी भएको खबर सुनेर येशूले के भन्नुभयो, “यो _________सम्म पुर्‍याउने रोग होइन” (यूहन्ना ११:४)। यस भनाइको तात्पर्य के थियो? के यसको मतलव लाजरस मर्नेछैन भन्ने थियो? उहाँको तात्पर्य यो त हुन सक्दैन किनकि लाजरस मर्नेछ भनी येशू जान्नुहुन्थ्यो (यूहन्ना ११:१४)। येशूको तात्पर्य यो थियो, यस रोगको अन्तिम परिणाम मृत्यु होइन। लाजरसको मृत्यु हुनेछ तर पनि उसको अन्त नै मृत्यु हुनेछैन! ऊ त पछि जिउँदो हुनेछ! येशूको तात्पर्य यो थियो:
“यो मृत्युसम्म पुर्‍याउने रोग होइन”
यदि यो मृत्युसम्म पुर्‍याउने रोग भइदिएको भए, अन्तिम परिणाम मृत्यु हुनेथियो:
परमेश्वरले एउटा मानिसलाई जन्मैदेखि अन्धा हुन दिनुमा उहाँको एउटा सुन्दर योजना थियो, ठीक त्यस्तै नै लाजरसलाई मर्न दिनुमा पनि परमेश्वरको एउटा सुन्दर योजना थियो (यूहन्ना ९:१-३ पढ्नुहोस्)।
द्रष्टब्यः यशूले लाजरसका निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुराको विचार गर्ने क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नतालाई बुझ्न आवश्यक छ। भविष्यमा हुने विश्वासीहरूको बौरिउठाइ लाजरसको बौरिउठाइ भन्दा धेरै फरक हुनेछ। लाजरस “मृत्युबाट बौरिउठेका थिए” यो साँचो हो (यूहन्ना १२:९), तर “अन्तिम दिन” मा हुने विश्वासीहरूको बौरिउठाइ र लाजरसको घटना उस्तै होइन (यूहन्ना ५:३९,४०,४४,५४)। लाजरस पुनर्जीवित पारिए (उनलाई फेरि जीवन दिइयो)। लाजरसलाई जीवनमा पुनर्स्थापित गरियो। लाजरस साँच्चै मरेका थिए (यूहन्ना ११:१४) तर परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा उनलाई फेरि शारीरिक जीवन दिइएको थियो। तर लाजरसलाई कहिल्यै नमर्ने नयाँ शरीर भने दिइएको थिएन। यद्यपि उनी अब फेरि जिवीत भए र बिरामी थिएनन्, उनी अझै पनि उही शरीरमा नै थिए र कुनै दिन तिनी फेरि मर्नेवाला थिए! येशूले लाजरसको जीवनमा जे गर्नुभयो त्यो छक्कलाग्दो थियो तरैपनि त्यो एउटा अस्थायी कार्य थियो, स्थायी थिएन।
भविष्यमा जब येशूले विश्वासी जनहरूलाई बौराएर उठाउनुहुनेछ, त्यो कार्य स्थायी हुनेछ। बौरिउठाइको समयमा विश्वासी जनहरूले नयाँ शरीर पाउनेछन् जुन शरीर अविनाशी र अमर हुनेछ (१ कोरिन्थी १५:५१-५४)। यसको मतलब तिनीहरूको शरीर कहिल्यै बुढो हुनेछैन, कहिल्यै रोगी हुनेछैन, साथै कहिल्यै मर्नेछैन। तिनीहरूले अनन्त-अनन्तसम्म जिइरहनका लागि तयार पारिएका शरीर पाउनेछन्। भविष्यमा लाजरसले समेत बौरिउठाइको एउटा नयाँ शरीर पाउनेछन्।
बौरिउठाइ भनेको सारा मानिसहरूलाई भविष्यमा हुने एउटा घटना हो (यूहन्ना ५:२८-२९ पढ्नुहोस्। एकातिर त्यहाँ जी________को बौरिउठाइ हुनेछ (यूहन्ना ५:२९)। यी मानिसहरू नयाँ शरीरहरूमा जिउनेछन् र तिनीहरूले अनन्तसम्म ख्रीष्टसित आनन्दमय सङ्गति गर्नेछन्। अर्कोतिर त्यहाँ द_______को बौरिउठाइ पनि हुनेछ (यूहन्ना ५:२९)। यी मानिसहरूलाई नयाँ शरीर दिइनेछ जुनचाहिँ अनन्तसम्म आगोको झीलमा रहनालाई रचिएको हुनेछ (प्रकाश २०:११-१५)। तिनीहरू सदाका लागि परमेश्वरदेखि अलग पारिनेछन्। तसर्थ, एउटा असल बौरिउठाइ हुनेछ (मुक्ति पाएकाहरूका निम्ति) र एउटा खराब बौरिउठाइ पनि हुनेछ (मुक्ति नपाएकाहरूका निम्ति)। तपाईं कुन बौरिउठाइमा पर्नुहुनेछ? छनोट तपाईंकै हो।
परमेश्वरले लाजरसलाई जे गर्नुभयो त्यो एकदमै विशेष थियो। उहँले एउटा मान्छेलाई चिहानबाट निकाल्नुभयो र उसलाई शारीरिक जीवनमा फर्काई ल्याउनुभयो। परमेश्वरले तपाईंका लागि र प्रत्येक विश्वासी जनका लागि भविष्यमा गर्नुहुने काम त झनै विशेष हुनेछ (फिलिप्पी ३:२०-२१; १ थेस्सलोनिकी ४:१६-१७ र १ कोरिन्थी १५ अध्याय पढ्नुहोस्)।
लाजरस बिरामी छ भन्ने खबर सुन्नासाथ के येशू तुरुन्तै बेथानी जानुभयो (यूहन्ना ११:६)? ______________। जुन ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीं उहाँ कति दिन बस्नुभयो (यूहन्ना ११:६)? ________________। याद राखौं, परमेश्वर कहिल्यै ढिलो गर्नुहुन्न ! उहाँ आफ्ना कार्यहरू जानीबुझी गर्दैहुनुहुन्छ, अनि सबै कामहरू उहाँ सठीक हिसाबले गर्नुहुन्छ। कतिपय कार्यहरू हामीले चाहेजस्तै चाँडो उहाँले नगर्नुहोला तर उहाँ कहिल्यै ढिलो हुनुहुन्न ! परमेश्वरले कहिल्यै ढिलो नगर्नुहुने हुनाले हामीले परमप्रभुको ________ ________ (अर्थात् उहाँको प्रतिक्षमा पर्खन) सिक्नुपर्छ (भजनसंग्रह २७:१४ )।
यी दुई दिन पछि येशूले भन्नुभयो, “हामी फेरि __________ जाऔं” (यूहन्ना ११:७)। बेथानी (जहाँ लाजरस थिए) र यरुशलेम (जहाँ येशूका धेरैजसो शत्रुहरू थिए) दुवै नै यहूदिया भनिने इलाकामा पर्दथे। यस इलाकामा फर्कन चेलाहरू किन डराएका थिए (यूहन्ना ११:८)? ______________________________________। यूहन्ना १०:३१-३३ मा यहूदीहरूले के गर्न खोजेका थिए भन्ने कुरा चेलाहरूले सम्झे। त्यतिखेर त उहाँ उम्कनुभयो (यूहन्ना १०:३९ ) तर के अब फेरि उहाँ उम्कन सक्नुहुनेछ होला?
येशूले चेलाहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, उहाँ दिनमा सुरक्षासाथ हिँड्न सक्नुहुन्छ (यूहन्ना ११:९-१०)। आफ्नो मृत्युको घडी अझै आइपुगेको छैन भनेर उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। येशू जान्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले उहाँलाई यस संसारमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई निश्चित समय अवधि दिनुभएको छ। उहाँका शत्रुहरूले यस समयलाई छोट्याउन सक्ने थिएनन् (यूहन्ना १०:१८)। आफ्नो काम गरी नसिध्याइकन उहाँ मर्न सक्नुहुन्न भनेर पनि उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवनमा पनि यही साँचो हुन्छ। एउटा विश्वासी जन ज्योतिमा हिँड्दछ र उसको जीवनका निम्ति परमेश्वरको इच्छा उसले पूरा गर्दै छ भने ऊ डराउनुपर्नेछैन। परमेश्वरले आफ्ना सेवकहरूको सुरक्षा गर्नुहुन्छ! मानिसले केही गर्ला कि भनेर के परमेश्वरको सेवक डराउनु आवश्यक छ (भजनसंग्रह ११८:६; भजनसंग्रह २७:१; हिब्रू १३:६)? __________________।
तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा कुरा भन्नुभयो जुन कुरा तिनीहरूले बुझेनन्: “हाम्रा साथी लाजरस _____________ छन्; तर म उनलाई _________बाट ____________ जान्छु” (यूहन्ना ११:११)। “लाजरस निदाएका छन्” भन्नुको तात्पर्य के थियो (यूहन्ना ११:१३)? __________________________________________। येशूको तात्पर्य के होला भनी चेलाहरूले सोचे (यूहन्ना ११:१२-१३)? _______________________________ ______________________। यूहन्ना ११:१४ मा येशूले कुरा सफा पार्नुहुन्छ। लाजरस त मृत्युको निद्रामा निदाइरहेका थिए! उनलाई निन्द्राबाट बिउँझाउने भन्ने येशूको भनाइको तात्पर्य के थियो? ______________________________________________________।
बाइबलमा मृत्युलाई बयान गर्न कतिपय ठाउँमा “निदाउनु” वा “सुत्‍नु” भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ (१ राजा २:१०; मत्ती २७:५२; लुका ८:५२; १ कोरिन्थी १५:२०; १ थेस्सलोनिकी ४:१४)। एउटा उदाहरण १ कोरन्थी ११:३० पनि हो: “किनकि यही कारणले गर्दा तिमीहरूको बीचमा धेरै कमजोर र रोगीहरू छन् अनि धेरै सुतिगए।” यसको मतलब यो होइन कि त्यहाँ केही कमजोर र रोगीहरू थिए अनि अरुहरू निदाइरहेका थिए। होइन, यसको मतलब हो,कोही रोगी थिए रकोही चाँहि साँच्चै मरिगए।
हस्पिटलको मुर्दाघरमा जानुभयो भने र मरेको मानिसको लाशलाई हेर्नुभयो भने, उक्त शरीर साँच्चिकै सुतिरहेको मान्छे जस्तै देखिन्छ! शरीर आराम गरिरहेको जस्तै देखिन्छ। मानिस मरेपछि उसको शरीरलाई बिश्राम दिइन्छ। तर त्यसले सघैंको लागि विश्राम पाउँदैन। भविष्यमा त्यस शरीरलाई केही गरिनेवाला छ।
सुतिरहेको मान्छे सघैंभरी सुतिरहँदैन भनेर हामीलाई थाह छ! उसको उठ्ने बेला आउँछ। चिहानमा सुत्‍ने अर्थात् विश्राम गर्ने शरीर पनि त्यस्तै हो। दानियल १२:२ मा हामी यसरी पढ्छौं: “पृथ्वीको धूलोमा ___________ भीडहरू ______________, केही अनन्त _____________को लागि र अरूहरूचाहिँ शर्म र अनन्त __________________को लागि।” मरेकाहरूलाई उठाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ (यूहन्ना५:२७-२९)? ________________।
येशूसँगै बेथानी जानलाई चेलाहरूको साहस थियो, तर थोमा को के हुन्छ होला भनी ठाने (यूहन्ना १:१६)? __________________________________। थोमाको सोचाइले फेल खायो! चाँडै नै येशूको मर्ने समय आउँदै थियो तर यो चेलाहरूको मर्ने समय भने आएको थिएन। आफ्नो प्रिय पुत्रको निम्ति परमेश्वरको एउटा सिद्द योजना थियो र हरेक चेलाहरूका निम्ति पनि परमेश्वरको सिद्ध योजना थियो।
मानिसहरू रुन्छन्, येशू सुस्केरा हाल्नुहुन्छ
येशू बेथानी आइपुग्नुहुँदा, लाजरस मरेको __________ दिन भइसकेको थिए (यूहन्ना १:१७ )। मार्था र मरियमलाई सान्त्वना दिन थुप्रै यहूदीहरू आएका थिए (यूहन्ना ११:१९।
दिदी बहिनीमा सबभन्दा पहिले को येशूकहाँ आए (यूहन्ना ११:२०)? ____________। के तिनी येशूले लाजरसलाई मर्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने ठान्थिन् (यूहन्ना ११:२१)? ________________। के तिनी येशूले अझै पनि केही न केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्थिन् (यूहन्ना ११:२२)? ______________
तब येशूले मार्थालाई एउटा गजबको प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ जुनचाहिँ आफूले गर्नै लागेको कुरासित सम्बन्धित थियो। “तिम्रो भाइ ___________ उठ्नेछ” (यूहन्ना ११:२३)। येशू गएर लाजरसलाई निद्राबाट बिउँझाउन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना ११:११ सँग दाँज्नुहोस्।
के मार्थालाई लाजरस फेरि उठ्नेछ भन्ने थाह थियो (यूहन्ना ११:२४)? ____________। मार्थाले, यो कुरा तुरुन्तै हुनेछ भनेर सोचेकी थिईन् कि पछि भविष्यमा हुनेछ भनेर (यूहन्ना ११:२४)? ____________________________। तिनलाई दानियल भविष्यवक्ताले दानियल १२:२ मा भनेझैं अन्तिम दिनमा त्यहाँ बौरिउठाइ हुनेछ भन्ने थाह थियो।
बौरिउठाइ, पछि भविष्यमा हुने एउटा घटना भनेर मार्था विश्वास गर्थिन्। उनले बौरिउठाइ त एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न खाँचो थियो जुन व्यक्ति ठीक उनकै सामु उभिइरहनु भएको थियो। येशूले मार्थालाई भन्नुभयो: “______________ र ____________ म नै हुँ” (यूहन्ना ११:२५।
“बौरिउठाइ” शब्दको अर्थ ग्रीक भाषामा “माथि उठ्नु” अर्थात् “ठाडो उभिनु” भन्ने हुन्छ। मानिस मरेपछि ऊ “लम्पसार पर्छ” अर्थात् उसलाई चिहानभित्र विश्राम गराइन्छ। मानिस मृत्युबाट बौरिउठाइँदा, ऊ “उभिन्छ” जसरी लाजरसस पनि चिहानबाट निस्केर आउँदा उभिए (यूहन्ना ११:४४)। येशू ख्रीष्टलाई चिहान र मृत्यु कुनै समस्या होइन। उहाँ बौरिउठाइ र जीवन हुनुहुन्छ। मृत्यु मानिसको महान शत्रु हो (१ कोरिन्थी १५:२६) तर येशू ख्रीष्टले यस शत्रुलाई जित्‍नुभएको छ! शंका-उपशंकाहरू र डरको कारण मार्थालाई लागेको थियो, येशू, मृत्यु र चिहानभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्न भनेर। येशू मृत्यु र चिहानभन्दा महान् हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न मार्थालाई खाँचो थियो। येशू ख्रीष्ट “जि ________ का ____________” हुनुहुन्छ (प्रेरित ३:१५।
येशूले भन्नुभयो, “बौरिउठाइ म नै हुँ।” यसको अर्थ यूहन्ना ११:२५ को अन्तिम खण्डमा खुलाइएको छ:
“जसले ममाथि विश्वास गर्छ, ऊ मरे तापनि जिउनेछ”
येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई शारीरिक मृत्यु कुनै समस्या होइन्। एक विश्वासी जन मरेपछि उसले केही गुमाउँदैन बरु केही पाउनेछ (फिलिप्पी १:२१-२३)। विश्वासी जनहरू शारीरिक मृत्युदेखि डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो त एउटा ढोका मात्रै हो, जसबाट जीवनमा प्रवेश गरिन्छ (जिवीत परमेश्वरसँगको अनन्त सम्बन्धमा)।
येशूले भन्नुभयो, “जीवन म नै हुँ” (यूहन्ना ११:२५)। यसको अर्थ यूहन्ना ११:२६ मा खुलाइएको छ:
“अनि जो जिउँछ र ममाथि विश्वास गर्छ, त्यो कहिल्यै _____________”
येशूले यूहन्ना ८:५१ मा यस्तै कुरा गर्नुभयो (अघिल्ला पाठहरूमा हेर्नुहोस्)। एउटा साँचो विश्वासी कहिल्यै परमेश्वरदेखि अलग पारिनेछैन। विश्वासीसँग अनन्त जीवन हुन्छ। उसले कहिल्यै आत्मिक मृत्युको अनुभव गर्नेछैन (परमेश्वरदेखि अलग हुनु पर्नेछैन।
मार्था, येशू परमेश्वरका __________, _________ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थिन् (यूहन्ना ११:२७), तर “बौरिउठाइ र जीवन म नै हुँ” भन्ने येशूको भनाइको तात्पर्य बुझिनन् (यूहन्ना ११:२५)। येशूभन्दा चिहान नै सामर्थी छ भनी सोचिन् उनले (यूहन्ना ११:३९-४० पढ्नुहोस्)। तर केही छिन पछि नै उनले “परमेश्वरको महिमा” देख्‍न लाग्दै थिइन् (यूहन्ना ११:४०)। परमेश्वरका पुत्र साँच्चै नै कति महान हुनुहुन्छ भनेर तिनले देख्‍न लाग्दै थिइन्। उहाँका लागि चिहान कुनै चुनौति होइन!
मार्था गइन् र त्यसपछि मरियम येशूलाई भेट्न आइन्। तिनका पछिपछि थुप्रै यहूदीहरू पनि आए उनीसँगै बिलाप गर्नलाई (यूहन्ना ११:२८-३१)। मरियमले येशूलाई भेट्नासाथ के उनले दिदीले भने जस्तै नै भनिन्? (यूहन्ना ११:३२ र ११:२१ बीच तुलना गर्नुहोस्)? _____________। लाजरस जिउँदो हुँदा नै येशू त्यहाँ हुनुभएको भए ता उहाँले केही न केही त अवश्य गर्नुहुन्थ्यो भनेर तिनले बिचार गरिन्। अब चाँडै नै उनले, लाजरस मरेर चार दिन भएको भएपनि येशूले केही न केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाह पाउनेवाला थिइन्। मृत्यु येशू भन्दा ठूलो होइन। येशू मृत्युको पनि प्रभु हुनुहुन्छ। यूहन्ना ११:३३ अनुसार मरियम के गर्दै थिइन् अनि यहूदीहरू के गरिरहेका थिए? ____________। तिनीहरू रोइरहेका थिए तर येशू भने पीडित भइरहनुभएको थियो।
“पिडित हुनुभयो” (यूहन्ना ११:३३) भन्नुको मतलब हो, येशू “आत्मामा साह्रै चुरिनु भयो” (औडाहा वा डाहा भयो)। यस शब्दले प्रायः रीस वा क्रोधले चुरिएको मानिसलाई जनाउँछ। येशू रिसाउनु भएको थियो। धर्मी हिसाबले उहाँ रिसाउनुभयो र बिचलित हुनुभयो। उहाँको वरिपरिको रुवाबासी र सुकसुकाइमा प्रभु खुशी हुनुहुन्नथ्यो। मरियम र उनीसँगै आएका यहूदीहरूले बुझ्न सकेनन्। तिनीहरूले मृत्युको बारेमा बुझेका थिएनन्। तिनीहरूले लाजरसको बारेमा बुझेका थिएनन्। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, तिनीहरूले येशू को हुनुहुन्थ्यो र येशूले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर बुझेनन्। जीवनका राजा तिनीहरूकै अगाडि उभिइरहनुभएको थियो र तिनीहरू भने मृत्युले गर्दा रोइरहेका र आलाप विलाप गरिरहेका थिए।
लाजरसको चिहान कहाँ छ भनेर येशूले सोध्नुभयो र तिनीहरूले उहाँलाई भने, “प्रभु, आउनुहोस् र हेर्नुहोस्” (यूहन्ना ११:३४)। त्यसपछि बाइबलले हामीलाई बताउँछ “__________________” (यूहन्ना ११:३५)। अंग्रेजी बाइबलमा यो नै सबभन्दा छोटो पद हो (दुई शब्द र नौ अक्षरहरू मात्रै)। तर नेपाली बाइबलमा ६ अक्षर मात्रै। (ग्रीक नयाँ नियममा सबभन्दा छोटो पदचाहिँ १ थेस्सलोनिकी ५:१६ हो – “सधैं आनन्द गर।”
येशू रुनुभयो, तर उहाँ यहूदीहरू रोए जस्तै गरी रोइरहनुभएको थिएन (यूहन्ना ११:३३ पढ्नुहोस्) यूहन्ना ११:३५ को “रुनुभयो” भन्ने शब्द हामीले यूहन्ना ११:३३ मा हेरेको “रोइरहेका” भन्ने शब्द भन्दा फरक शब्द हो। यूहन्ना ११:३३ मा हामी देख्दछौं, मरियम र यहूदीहरू रोइरहेका थिए। त्यहाँ “रोइरहेका” भन्ने शब्दको अर्थ हो ठूलो स्वरले आफ्नो दुःख प्रकट गर्दै विलाप गर्नु विशेष गरी मरेका मान्छेका निम्ति। यी यहूदीहरू लाजरस मरेका कारण रोइरहेका र आलाप विलाप गरिरहेका अनि घुँक्क घुँक्क सुक्सुकाइरहेका थिए। यूहन्ना ११:३५ को “रुनुभयो” शब्दले ठूलो स्वरले रोएको र आलाप विलाप गरेको जनाउँदैन। यसको मतलब हो “आँसु खसाल्नु”।
किन येशूले आँसु खसाल्नुभयो? निश्चय पनि उहाँका आँसु लाजरसका लागि थिएनन् किनभने लाजरसको मृत्यु उहाँको लागि कुनै ठूलो समस्या थिएन। लाजरसलाई उहाँले तुरुन्तै के गर्नुहुनेछ त्यो उहाँ जान्नुहुन्थ्यो (यूहन्ना ११:४,११,२३)। येशूले लाजरसको लागि आँसु खसाल्नुभएको थिएन बरु ती विलाप गर्नेहरूका लागि थियो! यी मानिसहरूले नबुझेका कारण उहाँ दुःखित हुनुभएको थियो। उहाँ तिनीहरूका अविश्वासका कारण दुःखित हुनुभयो।
येशू रुनुभएको यहूदीहरूले देखेर तिनीहरूले भने “हेर, उहाँले उनलाई (लाजरसलाई ) कति ________ गर्नुहुन्थ्यो” (यूहन्ना ११:३६)। तिनीहरूले भन्ठाने, उहाँ लाजरस मरेका हुनाले रुनुभएको थियो। यूहन्ना ११:३७ मा पढ्नुहोस्।कोही यहूदीहरू यसो भन्दै थिएः “येशू लाजरसलाई यति माया गर्थे भने, किन उहाँले लाजरसलाई मर्नदेखि बचाउन सकेनन्? अन्धाका आँखा खोल्न सक्नेले किन लाजरसको मृत्युलाई रोक्न सकेनन्?” के यी कुराहरूले येशू खुशी हुनुभयो (यूहनन्ना ११:३८)? __________। तिनीहरूका अविश्वासका कारण उहाँ फेरि रीसले चुर हुनुभयो। येशू, मुत्यु र चिहानका सामु केही गर्न सक्दैनन् भन्ने उनीहरूको धारणा थियो!
येशू लाजरसलाई मुत्युबाट बौराएर उठाउनुहुन्छ
लाजरसको चिहान एउटा गुफामा थियो (यूहन्ना ११:३८)। भित्र छिर्ने ठाउँ अगाडि एउटा ढुंगा राखिएको थियो। यो सम्भवत: पछि येशूको शरीरलाई राखिएको चिहान जस्तै थियो।
येशूले चिहानको मुखको ढुंगा हटाउन आदेश दिनुभयो (यूहन्ना ११:३९)। मार्था किन ढुंगा हटाइएको चाहँदैनथिन् (यूहन्ना ११:३९)? ___________________________________ ________________________। लाजरसको शरीर कुहिएर सड्न थालिसकेको थियो। तर येशू आफ्नो योजना जान्नुहुन्थ्यो र तुरुन्तै अलिकत्ति पनि दुर्गन्ध नलिइकन लाजरस चिहानबाट निस्कनेवाला थिए!
मार्थाले विश्वास मात्र गरिन् भने तिनले के देख्‍नेथिइन् (यूहन्ना ११:४०)? ___________________________। यूहन्ना ११:४ र ११:२५-२६ बीच तुलना गर्नुहोस्। लाजरसको बौरिउठाइ, परमेश्वरका लागि एउटा विशेष सुन्दर मौका थियो। परमेश्वरले आफूलाई विशेष प्रकारले चिनाउने मौका थियो।
तिनीहरूले ढुंगा हटाइसकेपछि येशूले प्रार्थना गर्नुभयो यूहन्ना ११:४१) उहाँले आफै मनमनै प्रार्थना गर्नुभयो कि उहाँले अरुहरूले पनि सुनून् भनेर ठूलो स्वरले प्रार्थना गर्नुभयो (यूहन्ना ११:४१-४२)? _________________________________________। जे हुन लाग्दै थियो, त्यसका लागि येशूले सबैका सामुन्ने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो!
यति प्रार्थना गरिसकेपछि येशू ठूलो स्वरले कराउनुभयो र भन्नुभयो, “हे लाजरस, _________________” (यूहन्ना ११:४३)। के लाजरसले प्रभुको आज्ञा माने (यूहन्ना ११:४४)? ________। येशूले नाम काढेर केवल लाजरसलाई बोलाउनुभयो (यूहन्ना १:४३)। पिताको इच्छा हुँदो हो त उहाँले मरेका अरूहरूलाई पनि मृत्युबाट बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो! त्यो घडी पनि आउनेछ, जसमा चिहानभित्र रहेका ________ले उहाँका स्वर सुन्नेछन् (यूहन्ना ५:२८)। अनि तिनीहरू निस्किआउनेछन् (यूहन्ना ५:२९)। मृत्यु र चिहान उहाँका लागि कुनै समस्या होइनन्।
लाजरस चिहानबाट कात्रोले बौरिएकै अवस्थामा निस्किआएको देख्‍नु पक्कै पनि अजीवको दृश्य थियो (यूहन्ना ११:४४)। लाशलाई प्रायः कपडाका फेरहरूले बाँधिएको हुन्थ्यो अनि बाँधिसके पछि साह्रै कडा गन्ध नआओस् भनी मसलाहरू छर्किएको हुन्थ्यो। लाजरस हिँड्डुल गर्ने “मम्मी” (मिश्रका पिरामिडहरूमा गाडिएका लाश) जस्तै देखिन्थे होला। येशूले मानिसहरूलाई उनलाई फुकाइदिन अह्राउनुभयो र जानदेओ भन्नुभयो (यूहन्ना ११:४४)।
यस आश्चर्यकर्म देख्‍नेहरू कसरी ट्वाँ परेर तीन छक्क खाए होलान् भनेर कल्पना सम्म गर्न पनि गाह्रो छ। अब विचार गर्नुहोस्, भविष्यमा हुने विश्वासीहरूको बौरिउठाइ लाजरसको भन्दा झन् कति धेरै गुणा गजबको हुनेछ। लाजरस जीवनमा फर्किआए तर उनी एक दिन फेरि मरे। तपाईंलाई दुई पटक मर्न कत्तिको चाहना छ? तर बौरिउठेका विश्वासीहरूका भने नयाँ शरीरहरू हुनेछन् र तिनीहरू फेरि कहिल्यै मर्नेछैनन्। तलको चार्टले लाजरसलाई के भएको थियो र भविष्यमा विश्वासीहरूलाई के हुनेछ भन्ने भिन्नताहरू देखाउँछ:
अमर शरीरहरू मरणशील शरीर
कहिल्यै मर्न नपर्ने (१ कोरिन्थी १५:५३)
फेरि कहिल्यै मर्न नपर्ने मर्ने शरीर (यूहन्ना १२:१०)
दोस्रो पटक मर्नैपर्ने
वृद्ध र नाश नहुने, नसड्ने शरीर (१ को. १५:५३)
अनन्तसम्म रहिरहने शरीरहरू (१ को. १५:४२-४४) नाश हुने र कुहिने (१ को. १५:४२-४४)
माटैमा मिल्नुपर्ने शरीर (उत्पत्ति ३:१९)
येशूका शत्रुहरू षड्यन्त्र रच्छन्
यस्तो उल्लेखनीय आश्चर्यकर्म देखेर धेरैजना यहूदीहरूले येशूमाथि ___________ गरे (यूहन्ना (यूहन्ना ११:४५)। अरुहरूले चाहिँ फरिसीहरूकहाँ गएर येशूले गर्नुभएका कुराहरू बताइदिए (यूहन्ना ११:४६)। यहूदी अगुवाहरूले अब येशूलाई के गर्ने हो भनेर निर्णय गर्नु पर्‍यो (यूहन्ना ११:४७)। के उनीहरूलाई येशूका आश्चर्यकर्मका बारेमा थाह थियो (यूहन्ना ११:४७)? __________।
के यी अगुवाहरू येशूलाई यत्तिकै छोडिदिनु असल होला भन्ने बिचार राख्दथे (यूहन्ना ११:४८)? _____________। येशू यसरी नै लोकप्रिय बन्दै जानुहोला र धेरै-धेरै मानिसहरू उहाँको पछि लाग्लान् भनेर तिनीहरू चिन्तित थिए। शायद येशू र उनका चेलाहरूले कुनै दिन राजनैतिक शक्ति पो हात पार्ने हुन् कि भनी उनीहरूले सोचे। यस्तो हुन गएको खण्डमा रोमीहरूले हस्तक्षेप गरेर यहुदीहरूलाई झन् कडासाथ शासन गर्नेछन् भन्ने कुरा यी यहूदीहरूले जान्दथे। येशूले गर्दा सारा राष्ट्र नै खतरामा छ भनी तिनीहरूले मुर्ख पाराले सोचे।
तब, कायफा, महापुजाहारीले एउटा कुरा बोले जसको वास्तवमा दुइटा फरक अर्थ छन्। उनको भनाइ हामी यूहन्ना ११:५० मा पाउँछौं:
“सारा जाति __________ नहोस् भनेर यस जनताका निम्ति ________ मानिस मर्नु नै हाम्रालागि फाइदा छ”
कायफाले यो एउटा अर्थमा भनेका थिए तर कायफाले नबुझिकनै उनका भनाइले अर्कै सन्देश पनि बोकेको थियो! यस्तो भयो कि कायफाले जे बोले, त्यो परमेश्वरको इच्छाअनुसार नै थियो!
हामी उनको भनाइका दुई अर्थहरूलाई विचार गरौं। कायफाले जब यी कुराहरू भने, उनले यसो भन्न खोजेका थिएः “हामीले ख्रीष्टलाई जिउँदै छाड्यौं भने पक्कै नै रोमीहरू आउनेछन् र हामीलाई नाश गर्नेछन् अनि हामीले जनतामाथि कहिल्यै शासन गर्न पाउनेछैनौं। यसो हुनुभन्दा त एउटा मानिस (येशू) मारिनु र सारा जाति नष्ट हुनबाट (रोमीहरूद्वारा) यो नै एकदम उत्तम हुन्छ।” यो त वास्तवमा येशूलाई नष्ट गर्ने दुष्ट षड्यन्त्र मात्रै थियो।
तर यी कुराहरूको अर्को अर्थ पनि छ। कायफालाई थाहै थिएन तर उनले संसारकै सबभन्दा सुन्दर शुभ-सन्देश उच्चारण गर्दैथिए! येशू ख्रीष्ट सारा जातिका निम्ति मर्नैपर्छ। सुसमाचारको मीठो सन्देश यही नै हो। हामी नाश हुन नपरोस् भनेर ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नैपर्छ। हामी बाँच्न सकौं भनेर उहाँ मर्नैपर्छ। ख्रीष्ट मानिसको सट्टामा मर्नुपर्छ। त्यसकारण, कायफाले येशूलाई मार्ने एउटा दुष्ट मतोको कुरा गरेका भएता पनि परमेश्वरले त्यही नै शब्दहरूलाई सुसमाचारको सुन्दर सन्देश प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्नुभयो। जानी नजानीकनै, कायफा सबभन्दा पहिला सुसमाचार प्रचार गर्नेहरू मध्येका एक ठहरिन पुगे। परमेश्वरले मानिसको क्रोधलाई समेत उहाँको प्रशंसामा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रा परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, जसले मानिसका सबैभन्दा दुष्ट योजनाहरूलाई समेत उहाँको अचम्मको योजना पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर दुष्ट मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारले बोल्न र काम गर्न दिन सक्नुहुन्छ, तर यी जे जस्ता भए पनि त्यसले नै परमेश्वरको योजना सफल पारिरहेको हुन्छ। तिनीहरू हार्नेहरू हुन्, परमेश्वर जित्नेवाला हुनुहुन्छ। तपाईं लूका २२:२२, प्रेरित २:२३-२४ र प्रेरित ४:२६-२८ जस्ता पदहरू पढेर यस्तो कसरी हुनसक्छ भनेर थाह पाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले विश्वास नगर्नेहरूलाई समेत उहाँको सिद्ध योजना पूरा गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यस दिनदेखि उसो, यहूदीहरूले के गर्ने मतो गरे (यूहन्ना ११:५३)? ____________ _______________। परमेश्वरको योजना मुताविक अब चाँडै नै येशूले आफ्नो प्राण दिनुपर्ने समय आउँदैथियो। उहाँको घडी आइसकेको नै त थिएन र त येशू आफ्ना चेलाहरूसँग इफ्राइम भनिने शहरमा निस्कनुभयो (यूहन्ना १२:१२-१९)। येशूको मृत्युको घडी नजिकै आएको थियो (यूहन्ना ११:५६)। अर्को अध्यायमा हामी देख्‍नेछौं, उहाँ निस्तारको लागि यरुशलेम आउनुहुन्छ। उहाँ खुल्लमखुल्ला, सबैको देखिने गरी आउनुहुन्छ (यूहन्ना १२:१२-१९)। तर उहाँ आउनु अघि, उहाँ एकदम खोजिएको मानिस हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना ११:५७)। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उहाँ “टाउकाको मूल्य तोकिएको मानिस” हुनहुन्थ्यो। तिनीहरू उहाँलाई पक्रन र मार्न चाहान्थे (यूहन्ना ११:५७,५३)।
तुरुन्तै तिनीहरूले येशूलाई पक्रनेछन् र उहाँलाई एउटा रोमी क्रुसमा टँग्याउँनेछन्। त्यसपछि उहाँको मृत शरीरलाई लाजरसलाई जस्तै चिहानमा राखिन्छ तर लाजरस जस्तै उहाँ फेरि मर्नुहुन्न (रोमी ६:९, प्रकाश १:१८)। जसरी लाजरस बौरिउठ्नु अघि नै उनको बौरिउठाइ हुनेछ भनेर येशूले भविष्यवाणी गर्नुभयो (यूहन्ना ११:४,२३) त्यसरी नै उहाँले अघि नै आफ्नै बौरिउठाइको पनि भविष्यवाणी गर्नुभयो (यूहन्ना २:१९-१०:१७; मत्ती १६:२६)। मृत्युले उहाँलाई बाँधिराख्‍नु असम्भव थियो (प्रेरित २:२४।
के तपाईं उहाँमाथि भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ जो नै बौरिउठाइ र जीवन हुनुहुन्छ? के तपाईं अनन्त मुक्तिका लागि जीवनका राजामाथि भरपर्दै हुनुहुन्छ? येशूले भन्नुभयो,
“जो जिउँछ र ममाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिल्यै मर्नेछैन” (यूहन्ना ११:२६)!
“के तिमी यो विश्वास गर्छ्यौ (गर्छौ)
(यूहन्ना ११:२६)?” __________________
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 13:27:252020-11-27 13:41:41बौरिउठाइ र जीवन
असल गोठालानम्र दास (भाग १)